Nasiib darrose, waxay noqotay mid caan ku ah xirfadaha dad badan oo shaqeeya, shaqo ka eryidda sababo dhaqaale awgeed waxay dib ugu celisaa shaqaalaha shaqo la'aanta ah ee suuqa shaqada iyaga oo "raadinaya macnaha" doorashadooda xigta ee muhiimka ah. Sidan ayay sheekada Aurélie ku bilaabataa, oo aan maanta la kulanno. Oo halkan sidoo kale, waxaan la kulmi doonnaa "classic" kale: kan dib -u -tababbarka oo aan noo oggolaanayn inaan sare u qaadno oo keliya, laakiin, gunno ahaan, dhoolla -caddayn!
3 sano ka hor, waxaad ku soo mari lahayd Aurélie khaanadaha dukaanka weyn ee DIY halkaas oo ay ku labisnayd lebiskii La -taliyaha Iibka. Markii ay jirtay 33 sano, iyada oo gacanta ku haysata diblooma ganacsi, Aurélie waxay u samaysay meel raaxo leh nafteeda kadib 9 sano oo isku xigta jagadan. "Waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin heerka shatigayga ganacsiga, laakiin shaqadu way i soo jiidatay, jawiga kooxdu wuu fiicnaa, waxaan ka helay koontadayda halkaas", ayay falanqaynaysaa. Marka laga reebo in dhibaatooyinka dhaqaale ee soo wajahay dukaankiisu ay tilmaami doonaan dhammaadka CDI -da. Isagoo wajahaya, saddex ikhtiyaar ayaa isla markiiba soo baxa: aqbal u wareejinta dukaan kale oo calaamadda ah. Way diiday ; si ay dib ugu habeeyaan shirkadda dhexdeeda astaan ​​kale oo xirfadeed. Ma yeelno
Beddel shaqada iyo nolosha adigoo uga mahadcelinaya tababbarka Kaaliyaha Sharciga: Aurélie ayaa markhaati u ah. Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Abuuritaanka ganacsiga: sida ugu habboon ee loogu diyaariyo mashruucaaga
horeNoqoshada Kaaliye Iibinta: Anissa isbadal xirfadeed oo dhiirigelin leh.
socda“Dib -u -tababarid xirfadeed waa ficil ballanqaad. "